Nhau - Musika wemidziyo yekuparadzanisa musika: Inotarisirwa kuwana yakakosha kukura kwemari mu2020 uye kusvika 2026
"Chirevo Intellect inopa mushumo uchangoburwa pamusoro pekuongorora uye fungidziro yemusika wekuparadzanisa mhepo kubva muna 2020 kusvika 2026. Chirevo ichi chinopa ruzivo rwakakosha uye chinopa vatengi mukana wekunokwikwidza kuburikidza nemishumo yakadzama. Pamusoro pezvo, gwaro rinotarisana nevatambi veMajor. iyo indasitiri yekuparadzanisa michina indasitiri kutsanangura uye kuongorora yekutengesa vhoriyamu, kukosha, musika mugove, musika makwikwi nzvimbo uye zvazvino kuitika.
Mhepo yekuparadzanisa michina musika ichakura kubva kuXX muna 2019 kusvika kuXX muna 2026, iine huwandu hunofungidzirwa hwegore rekukura kweXX. Gore rekutanga rinotariswa muchidzidzo ndi2019, uye saizi yemusika inotarisirwa kuve kubva 2020 kusvika 2026.
Chekutanga pane zvese, chirevo ichi chinopa kutarisisa kweiyo indasitiri, kusanganisira madudziro, kupatsanura, kunyorera uye maindasitiri emaketani mhinduro. Mhepo yekuparadzanisa michina indasitiri ongororo inopihwa kumusika wepasirese, kusanganisira nhoroondo yekuvandudza, chikamu chekuongorora, hukuru hwedunhu kusimudzira uye kuongororwa kwakazara kwevakwikwidzi.
Chechipiri, ongorora kukura kwemitemo uye zvirongwa, pamwe nemaitiro ekugadzira uye zvivakwa zvemutengo. Chirevo chinotaurawo nezvekupa uye kudhara data, kuendesa kunze kwenyika data, mitengo, mitengo, mari, uye miganho yakazara mumatunhu makuru (senge United States, Europe, China, neJapan) nedzimwe nzvimbo huru. Uye zvakare, iyo yemhepo yekuparadzanisa michina musika inozokarakadza musika maitiro ongororo, kutyaira zvinhu nezvinetso zvinoenderana nehunhu hwevatengi uye dzakasiyana nzira dzekutengesa.
Iyo coronavirus (COVID-19) iri kupararira pasirese, ichikanganisa zvakanyanya hupfumi nemisika yepasirese. Chirevo chinotarisa uye chinotsanangura kukanganisa kwe COVID-19 pamusika wemidziyo yekuparadzanisa misika muzvikamu zvese zvemusika, matunhu, nyika uye vatambi vakuru. North America neEurope ndiyo nyika dzakanyanya kubatwa necoronavirus, uye ndivo vatambi vakuru muhupfumi hwenyika. Chirevo chinoongorora zvakadzama kukanganiswa kwemusika pamusika wemidziyo yekuparadzanisa mweya, nzira dzekukura, kuvhiringidzika muChina, uye maitiro ekushandisa.
Vagadziri vepamusoro mumusika wepasi rose wemidziyo yekuparadzanisa michina ndeiyi: Linde JSC Cryogenic Metal Mhepo Liquid Mhepo Zvigadzirwa Taiyo Nippon Sanso Praxair HNEC Hangyang Boka Messer Sichuan Mhepo Kuparadzanisa AMCS Mhepo Mvura Gesi Injiniya LLC
Nekuderera kwekukura kwehupfumi hwenyika, iyo indasitiri yekuparadzanisa michina indasitiri yakatamburawo imwe mhedzisiro, asi yakaramba iine tarisiro yekukura mumakore mana apfuura. Musika wepasi rose wemidziyo yekuparadzanisa michina yakachengetedza avhareji yegore yekukura mwero weXX.%, kubva kuXX USD muna2018 kusvika kuXX USD muna2026. Nyanzvi dzedu dzemumunda dzinotenda kuti mumakore mashoma anotevera, musika wekuparadzanisa mweya unowedzera kuwedzera mu 2026.
Chirevo Intellect chinopa maonero akajeka ezvikamu zvakasiyana, senge segmentation ongororo, vanoongorora matunhu, chigadzirwa portfolio, ichiteverwa neruzivo rwakadzama nezvevatungamiriri vemakambani nemaitiro avo eM & A.
Mukutaura kwenzvimbo, uyu mushumo unowongorora vagadziri vepamusoro nevatengi, ichitarisa pane kugona kwechigadzirwa, kuburitsa, kukosha, kudyiwa, mugove wemusika uye mikana yekukura kumatunhu akakosha, achifukidza
Mhan'ara Intellect ndiyo yako-yekumira mhinduro yezvose zvine chekuita nekutsvaga kwemusika uye hushamba hwemusika. Isu tinonzwisisa kukosha kwehungwaru hwemusika uye zvido zvaro munyika yanhasi inokwikwidza. Chikwata chedu chehunyanzvi chinoshanda nesimba kuti chiwane gwaro rechokwadi rekutsvagisa, richiperekedzwa nedata risinganetsi, kuona kuti tinogona kukuunzira mhedzisiro yakanaka nguva dzese. Naizvozvo, timu yedu ichafara kukupa iwe nerubatsiro rwakanakisa, kunyangwe iri mushumo uchangoburwa wemuongorori kana chikumbiro chakasarudzika.